Oke Osimiri Tasman: njirimara, ihu igwe, ahịhịa na osisi | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ụdị osimiri nke pụrụ iche n'ọtụtụ ụzọ. Ọ gbasara oké osimiri tasman. Ọ dị na mpaghara ndịda ma nwee ihu igwe dị iche, yana ahịhịa na ahịhịa dị iche iche. Enwere ike ịkọwa mpaghara a nke ọma dị ka akụkụ ndịda nke ala mmiri niile dị na Pacific. Ọ dị n'ụsọ Oké Osimiri Australia na New Zealand nke Oké Osimiri Tasman na-asacha.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile, nhazi, ahịhịa na anụmanụ nke Oke Osimiri Tasman.
2 Ihu igwe Tasman
3 Oké Osimiri Tasman na ndị bi na ya
Ọnọdụ nke oké osimiri a pụrụ iche, ebe mpaghara a dum na-agafe ọtụtụ mpaghara ihu igwe. Ajụjụ ọzọ na-adọrọ mmasị bụ njedebe ya. Ọ bụ ebe ndịda nke ọdọ mmiri Pacific Ocean. Ọ bụrụ na anyị elee anya na eserese ngosi, anyị pụrụ ịhụ oké osimiri a ka ọ bụrụ nnukwu diamond nke jikọtara kọntinent ndị ahụ. N’oké osimiri a, e nwere ọtụtụ coral dị iche iche, agwaetiti na ebe dị elu nke ala. Agwaetiti Norfolk bụ ebe ugwu nke ókè-ala n'etiti oke osimiri.
Oké Osimiri Tasman dị oke mma ọ nwere mpaghara nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde kilomita atọ na ọkara 3.5. Okpomoku ya dikwa. Akụkụ kasị mie emi nke oké osimiri a maara dị ka ala Tasmanian ma nwee omimi nke mita 6.000. Agwaetiti Tasmania bu nke kachasi nma n’osimiri a. Ọ dị n’agwaetiti dị n’ebe ndịda Ọstrelia ihe dị ka narị kilomita abụọ na iri anọ.
Mpaghara a dum na-aru oru. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ banyere usoro ihe ọmụmụ ala niile na-eme n'akụkụ ndị a. Ihe kachasị ewu ewu banyere Oké Osimiri Tasman bụ ụba nke ihe ndị dị ndụ dịgasị iche iche, ma na ahịhịa na ahịhịa. A na-achọta anụmanụ ndị pụrụ iche ebe a, ndị kachasị ama ama bụ ekwensu Tasmanian. Ọzọkwa ihe ị ga-ekwu na o nwere ọtụtụ coral reef. E nwere mpaghara a maara dị ka agwaetiti coral na ọ bụ nnukwu nkume ọ na-ewe ihe dịka narị mita isii n’elu elu oke osimiri, ma dịkwa ihe dịka 600 mita.
A na-ahụkarị ụmụ amaala amaala agwaetiti na Tasmania nke mmadụ ole na ole bi na ya. Iji maa atụ, Lord Howe Island nwere ọnụọgụ mmadụ 400. Ọ bụ agwaetiti kacha ochie n’oké osimiri niile. N’akụkụ ụsọ mmiri ahụ, anyị na-ahụ akụkụ dị larịị n’ókèala dum. N’ime mmiri dị n’ụsọ osimiri, a na-ahụta ha n’ala ala aja na ogbu mmiri, ụrọ na ngwakọta nke ha abụọ.
Ihu igwe Tasman
Abel Tasman choputara Osimiri Tasman na 1640. N'ihi ya aha ya. Enweghị ọtụtụ ozi gbasara oke osimiri a ọtụtụ afọ gara aga. Ndị mmadụ amadịghị ebe Australia nọ.
Banyere ihu igwe, anyị nwere ọdịiche na mpaghara ahụ dum. N’akụkụ Oké Osimiri Tasman, e nwere ebe udu mmiri, udu mmiri na ebe okpomọkụ. Varietydị ugwu a dịgasị iche iche na-eme ka o kwe omume ịzụlite ọtụtụ ahịhịa na ahịhịa, na-eme ka ọ bụrụ ebe obibi pụrụ iche. Ọnọdụ ihu igwe na-emetụta oke osimiri nke enwere ike ịchọta ebe a. Igwe ikuku na-ekpo ọkụ nke na-agagharị na mpaghara ndị a na-eme ka mmiri rute ogo 26. N’akụkụ ndịda ndịda mmiri nwere mmiri na-ajụ oyi n’ihi ịdị nso na Antarctica. Somefọdụ iyi nwere nnukwu akụkụ nke iceberg dị ka okpomọkụ na-agbadata ihe efu na oge ụfọdụ n'afọ.
Otu ihe ahụ na-eme na ebili mmiri. Enwere mmegharị mmegharị nke nwere ike iru mita ise. Ọ dịkwa iche na usoro nke oke ifufe. Ifufe nke sitere n’Oké Osimiri Pasifik bụ maka ịdị adị nke oke ebili mmiri ndị a. Temperaturesba ụba nke oke osimiri na-eme ka ikuku ọkụ dị elu na ikuku ikuku na elu. Mgbe ikuku na-ekpo ọkụ na-ebili ma na-ezute ikuku oyi na ịdị elu, ha na-agwụ ma na-enye igwe ojii mmiri ozuzo. Na iche nke okpomọkụ ike ike oké ifufe nwere ike si na palitere ụfọdụ onodu ubochi ọdachi.
Karịsịa ọ ga-ahụ kwuru na n’agbata ogo ogo 40-50 bụ ebe enwere nnukwu nsogbu nke oke ebili mmiri.
Oké Osimiri Tasman na ndị bi na ya
Anyị ekwuola na ọnọdụ ahụ nwere ọtụtụ mpaghara ihu igwe. Nke a na - ebute mmetụta na ndị bi na mpaghara ndị a. Na mpaghara ugwu enwere okpomoku zuru ezu ka enwe ihu igwe ebe okpomọkụ. Enwere ike ịhụ ya ọkachasị n'ihi ịdị adị nke ụba fauna. N’ime ụdị ụfọdụ anyị hụrụ, anyị na-ahụ azụ shark, azụ na-efe efe na ọtụtụ anụmanụ ndị na-enye ara dị ka azụ.
Otutu umu umu azu shark biri na Ndida Osimiri Tasman. Nnukwu ọcha bụ ihe a kacha mara amara. Ọtụtụ ndị njem na-atụ ụjọ maka oke nku ya. Enwere ndị njem na agịga na ngwa ndozi mmiri iji hụ shark ọcha. Ihe nkiri ndị njem a dị oke mkpa maka ego nke mpaghara Oké Osimiri Tasman. N’aka nke ọzọ, azụ̀ ndị na-efe efe dị egwu n’ogo, mgbe ụfọdụ na-eru ọkara mita n’ogologo. Ọ na-ebukarị na mmiri ọkụ ma nwee nku 4. Ha nwere ike isi na mmiri gafee site na oke elu. Ogologo nke ụgbọ elu n'elu oke osimiri na-adabere na ọsọ nke iyi mmiri.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ndị anụ ọhịa na Oké Osimiri Tasman, ị ga-agarịrị akụkụ ugwu. Anyị nwere ike ịchọta sperm whale, gallows na fin whale. Ndị cetaceans a na-ebi ebe ndị a n'ihi nsị nke zooplankton n'ime mmiri. Anya Cetacean bụ ihe ọzọ na-ewu ewu na-eme njem nleta.
N'ikpeazụ, anyị ga-ekwu maka ụfọdụ ụdị ahịhịa na ahịhịa. Algae na-eto eto na mpaghara ugwu ebe ihu igwe dị ọkụ ma dịkwuo oke. Oyi oku adighi emetuta otutu azu. Abụkarị ụdị dị ka tuna, makarel, Jorge, naanị, na ndị ọzọ.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oké Osimiri Tasman na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Tasman